Madaxwaynihii Hilibkiisa La Cuney!- Mid Ka Mid Ah Qisooyinka Dunida Ka Dhacay Kuwooda Ugu Layaabka Badan | Berberatoday.com
Hargeysa(Berberatoday.com)-Rumayso ama ha rumaysan waxa ay tani ka mid tahay qisooyinka layaabka leh ee qaaraddan Afrika soo maray kuwooda ugu layaabka badan ee la xidhiidha dhinaca siyaasadda. “Markii la diley ka bacdi, ayaa jidhkiisii la moofeeyey oo waliba ay cuneen, kama tagin ilaa calooshiisa maahee. Haa, xitaa taliyihii baa hilibkii madaxwaynaha saxan ku ritey oo cuney” sidaa waxa yidhi Jackson Doe oo ay wada dhasheen Madaxweynihii hore ee waddanka Liberia Samuel Doe oo taariikhda la sheego in maydkiisa la solay inkasta oo aan la isku raacsanayn in la cunay hilibkiisa. Madaxweynihii hore ee macangaga ahaa ee dalka Liberia Samuel Doe waxa uu talada dalkiisa qabsadey isagoo laba xiddigle ah, wuxuuna afganbi dalka kagala wareegay madaxwaynihii xilligaas ee William R. Tolbert. Wuxuu ballan ku qaadey inuu dib usoo celin doono sumcaddii dalka, kala danbayntii iyo dhaqaalihii. Wuxuu maxkamadda ciidanka saaray madaxwaynihii uu xilka kala wareegey, dhowr bilood kadibna wuxuu ku toogtey meel fagaare ah, isagoo danbigiisu ahaa musuq iyo xalaaleysi hantida ummadda.